स्वागतम् स्वागतम् पाहुनालाई: महिलाको मन जित्ने आठ मन्त्र
तपाईं आफ्नी सपनाकी रानीको मन जित्न चाहनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुहोस्- उमेर बढ्दै जाँदा शब्दभन्दा बढी काम नै गर्नुपर्छ । आउनोस्, हामी तपाईंलाई युवती पट्टयाउने आठवटा गुरुमन्त्र सिकाउँछौँ ।
मन्त्र १. झुक्किएर पनि हतार नगर्नुस्पुरुषहरूले गर्ने यौटै गल्ती के हो भने उनीहरू अलिकति पनि धैर्य नगरी मन पराएकी केटीलाई एकैपटक झ्वाप्पै खोतल्न चाहन्छन् । यसले त केटी भाग्छन् नि ! उनलाई त यसरी स्पर्श गर्नुपर्छ कि उनी विस्तारै तपाइंको छेउमा आउन सकून् । जस्तै सडकमा हिँड्दा आफ्ना हात दिनु वा उनको पिठ्युँमा सुस्तरी भद्र पाराले स्पर्श गर्नु । थाहा पाइराख्नुस्, केटीहरू असल व्यहोरा र पुरुषार्थ रुचाउँछन् । उनीहरु उत्ताउलो होइन, धैर्यवान् पुरुषमा बढी ध्यान दिन्छन् । हत्तनपत्त आफ्नो शरीरमा छोएको ती त्यति मजा मान्दैनन् । त्यसैले स्पर्श विस्तारै सुरु गर्नोस् । शरीरमा छुनुअघि उनको परामर्शलाई तपाईंले महत्त्व दिनुहुन्छ र उनलाई तपाईं आदर गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्यो भने तिनले तपाइर्ंको स्पर्श तथा तपाइंप्रति विश्वास गर्नेछिन् ।
उनले खोजेको असली पुरुष तपाइं नै हो भन्ने विचार गर्न उनलाई समय दिनुस् । यदि उनलाई त्यस्तो महसुस भयो भने उनको मन तपाइंले सजिलै जित्न सक्नुहुन्छ ।
मन्त्र २. पहिले खासखुस गरिहेर्नुस्ओठैमा म्वाई खानुअघि, उनको कानैनेर गोप्य केही भनेझै खासखुस गरिहेर्नोस् । अलि कामुक पाराले विस्तारै बोल्नोस् त, उनी तपाईंको तरिकामा आकषिर्त हुनेछिन् । तपाइं के शब्द उच्चारण गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेतिर उनको ध्यान जानेछैन । आफ्नो आवाजलाई गम्भीर बनाउनोस् । विस्तारै आत्मविश्वासका साथ बोल्नोस् । कान महिलाको यौनोत्तेजक अंग हो । ठूलो स्वरभन्दा सानो फुस्फुसे स्वरले यसलाई उत्तेजित पार्छ । महिलालाई यस्तो सार्‍है मन पर्छ । खासखुसलाई अति नाटकीयचाहिँ नबनाउनोस् ।
मन्त्र ३. यौन प्रसंगमा छाडा नहुनुस्यौनबारे कुरा उप्काएर अनि समागम गर्दाको आनन्दका कुरा गर्दिएर जिस्काउँदा पहिलो कदम सही हुन सक्छ । तर, ठाडै सेक्सका कुरा गरे राम्रो हुन्न । विस्तारै छुस्स यौन समागमका विम्ब उपस्थित हुनेगरी कुरा गर्नोस् । जस्तै, उनले तपाईं कस्तो राम्रो गाडी हाँक्नुहुन्छ भनेर प्रशंसा गरेमा तपाइं पनि उनी सँगसँगै वा उनका लागि काम गर्दा आउने आनन्दका बारे भनिहाल्नोस् । धेरै महिलाले पुरुषसँग सेक्सका बारे कुरा गर्न संकोच मान्छन् । लोग्नेमान्छेले यो चरित्र ख्यालै नगरी छाडा तरिकाले कुरा गर्‍यो भने त्यो प्रयास असफल हुन्छ ।
मन्त्र ४. निरन्तर प्रशंसा गरिरहनुस्जिस्काउन पनि ठीक तरिकाले जिस्काउन सकिन्छ । राम्ररी जिस्क्याउन जान्यो भने उनलाई तपाईं चाहनुहुन्छ भन्ने पर्छ र सफलता हात लाग्न सक्छ । उनलाई प्रशंसा गर्न नछाड्नोस् । विस्तारै भद्र किसिमले समात्नोस् यसरी कि तपाइं अब च्वाप्पै म्वाई खाँदै हुनुहुन्छ जस्तो । उनका केशमा विस्तारै हात डुलाउनोस्, कानैनिर फुस्फुसाउनोस्, तर झ्वाट्टै म्वाईचाहिँ खाइहाल्ने काम नगर्नोस् । आत्मनियन्त्रण गर्न सक्ने महिला पुरुषलाई माया मात्र गर्छन् । ठाउँ तयार गर्नोस् । पर्खनोस्, चाँडै उनी त्यहाँ आइहाल्छिन् नि ! मन्त्र५ . उनको रुचि थाहा पाउनुस्उनको नजिक हुने उपाय खोज्नोस् । गीत, नाच, संगीत, खेल केमा उनलाई रुचि छ, थाहा पाउनोस् । र, आफूलाई ती रुचिको अभ्यस्त बनाउनोस् । आफ्ना कुरा दिक्क लाग्दोखालका भए कि भनेर होस पुर्‍याउनोस् । सतर्क हुनुहोस्, उनलाई प्रभावित गर्ने चक्करमा कतै तपाई बेकारका कुरा गरेर उनलाई भड्काइरहनुभएको त छैन ?
मन्त्र ६. भेट्न घरमै बोलाउनुहोस्के तपाइं प्रेमिकालाई अन्यत्र नै भेट्नुहुन्छ । यदि त्यसो हो भने अर्कापटकदेखि आफ्नै घरमा वा कोठामा भेट्ने व्यवस्था गर्नुस् । भन्नुस्- के तिमी मैले पकाएको खानेकुरा चाख्न चाहन्छ्यौ ? आफ्नी प्रेमिकासँग आत्मीय हुन आफ्नो घर वा कोठा(एक्लै बसिएको खण्डमा) भन्दा अर्का उपयुक्त स्थान छैन । प्रेमिका प्रेमीको घरमा आउँदा जस्तो सजिलो कहीँ महसुस गर्दिनन् । यसले तपाईं उनीप्रति साँच्चैं नै गम्भीर हुनुहुन्छ र जीवनपर्यन्तका लागि सोचिरहनुभएको छ भन्ने विश्वास दिलाउँछ ।
मन्त्र ७. आफै अग्रसर हुनुहोस् महिलाहरू छिट्टै नजिक आउन कहिलेकाहीँ डराउँछन् । त्यसैले आफै अग्रसर हुनुहोस् । कुराकानीको सुरुवात आफै गर्नुस् । प्रेमिकालाई सजिलो महसुस गराउन जे काम पनि हतारमा नगरेर विस्तारै, एकपछि अर्के गर्दै गर्नुपर्छ । पुरुषले अग्रसरता लिएको युवतीहरु मन पराउँछन् ।
मन्त्र ८. जबर्जस्ती केही नगर्नुस्भद्र बन्नुहोस् । यदि तपाईंकी प्रेमिकालाई केही गर्न मन छैन भने जबर्जस्ती कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्नुस् । उनले खोजेको असली पुरुष तपाइं नै हो भन्ने विचार गर्न उनलाई समय दिनुस् । यदि उनलाई त्यस्तो महसुस भयो भने उनको मन तपाइंले सजिलै जित्न सक्नुहुन्छ । महिलाहरूसँग भद्र हुनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । भद्र बानीले नै युवतीसँग आत्मीय बन्न सहयोग गर्छ । उत्ताउलो युवकसँग युवतीहरु जिस्किन तयार त होलान् तर जीवनसाथीका रुपमा उनीहरुको छनोट गम्भीर पुरुष नै हुन्छ । स्रोतः एजेन्सी
Posted by बिजय कुमार श्रेष्ठ at 12:25 PM
लाहुरेको श्रीमती पुरुष बेश्यासंग सेक्समा मस्त-अप्ज...
विदेशनीतिमा ओबामाका १० चुनौती